ဓာတ်ပုံတွေကို ဘလော့မှာတင်ရင်း မလုပ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Flash Tutorial လေးတွေ ပြန်ပြီးလုပ်ဖြစ်တယ်။ အဆက်ပြတ်သွားရင် လုပ်ရတာသိပ်မလွယ်ဘူး။ အမှန်ပဲ။ အရင်တုန်းကတော့ Flash Crazy ပေါ့။ IDCS စတက်ခါစကတော့ စိတ်ကူးထဲရှိတာ Programmer ပေါ့။ နောက်ပိုင်း Programming ကို ဘာလို့မှန်းမသိဘူး မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ Flash နဲ့တွေ့တော့ Web ဘက်ကို လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ အဓိကကတော့ Design လေးတွေလုပ်နေရရင် စိတ်ထဲမှာ ပျော်နေမိတာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထူးတော့ မထူးပါဘူးလေ Flash မှာလည်း ActionScript ဆိုတာကြီးပါလားတာပါပဲ။ Programming ကအားလုံးနဲ့ ဆက်စပ်နေသလိုတောင် ဖြစ်လာပြီ။ OnlineTutorial လေးတွေ တစ်နေ့ကို တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခု လုပ်သွားမှဖြစ်မယ်။ မဟုတ်ရင် မေ့ကုန်တော့တယ်။ ဒီနေ့ အဓိကလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ်ကတော့ [ KIRUPA ] ပါ။ Tutorial လေးတွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ထိထိမိမိရှိတယ်။ VideoTutorial လေးတွေလည်းပါတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်။ Flash အပြင် .Net PHP နှင့် Photoshop Tutorial တွေပါ ပါသေးတယ်။ တကယ်ကို လေ့လာသင့်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲ အကြံပြုပါရစေ :)
ဒါနဲ့စကားမစပ် ... မနက်ဖြန် နှင်းကျအုံးမယ်တဲ့ ဒီမှာ တွေ့လိုက်တယ်။ နှင်းတောင်မှ ရိုးရိုးနှင်းမဟုတ်ပဲ Heavy Snow ဆိုပဲ။ ချမ်းရတဲ့ကြားထဲ ရေလောင်းပေးသလိုဖြစ်နေပြီ။ ရက်စက်ပါ့ ရာသီဥတုရာ။ မနက်ဖြန် ကျောင်းသွားချိန် ကျလို့ကတော့ ပြီးပါလေရောဗျာ။ အဲဒီလိုတော့ မနောက်လောက်ဘူးလို့ ထင်ရတာပဲ။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာလောက် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာ မရှိဘူး။
Myo Kyaw Htun 2:05 am
သင်္ကန်းရောင် အင်္ကျီလေး ဝတ်ပြီး ဘုန်းဘုန်းကျောပေါ် လက်တင်သလို လုပ်ထားတဲ့ ဟို ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် အကိုကြီး က မိုက်တယ်ဗျာ။ အဲ့ ခန့်တယ်ဗျာ။ ဓါးကြီး တကိုင်ကိုင် နဲ့ ဘာတွေများ လှီးနေလဲ မသိဘူး။ နှမ်းမနဲတွေ မြင်ရတော့ အရှိကို သတိရတယ်ဗျာ :P
jittoo12 11:04 pm
Watching those photos make me mouth water. hee =D
Ngat tar myarr pyaw par tal. =p~
Hope there'll be some events like this when I come to London in April.
HH 8:14 am
ko chan mya soe! do you happen to know the little girl in pink called "khin sandi tin" in your pic? if so can you ask them their contact adds (email add would be okie ).
Pls tell her mom, Aunty Nge that we misses her. thanks alot!!!
ကျွန်တော်တော့ မသိဘူးဗျ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ထပ်ပြီးရောက်ရင် မေးခဲ့ပေးပါ့မယ် :)
soe222 7:19 pm
Hi, CMS, nice blog, I kno an easy way to do Hta Ma Nei at home, useasilverstone non stick pot, dont need that much oil, put Kautnyin inaBlender, till u get Zagwe size, then
all the ingredients ko si thut, pi yin kaut nyin Mhaunt ko pot htei, water chein pi chet leit. Stir till its cooked. In 30 min it should be done. The only difference is Theit
ma see ta, ta khu bei, I think becoz the Sweet Rice here is the problem. Taste the same for me.
Try it. Thanks for ur informative tips and instructions. Soe